Day: Mee 5, 2020
N'ihi ike majeure n'ihi nje Corona, a tụlere banyere nkwụsị nke ma ọ bụ igbu oge nke ịkwụ ụgwọ. Agbanyeghị, emere ụgwọ akwụkwọ ikike nke àkwà Eurasia Tunnel, Osmangazi na Yavuz Sultan Selim. Site na SÖZCÜ rue akụkọ Yusuf Demir [More ...]
Ichetara na enwere ike ịnwe arụ ọrụ ọbụlagodi na enweghị ọrịa na-adịghị ala ala nke na-eso ndị mmadụ karịrị 65, Ọrịa Ọrịa Ahụ Ọkachamara Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, mfu ndị a nwere afọ ndụ ha na-eme onye ahụ [More ...]
Elegharala inyocha nrụgide taya nke ụgbọ ala gị dọwara adọta
Vehiclesgbọala anyị na-echere n'ime ogige ụbọchị ndị a mgbe ọ dị mkpa ịhapụ ụlọ ọ gwụla ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'ihi ntiwapụ nke COVID-19. Ekele, ka anyi jikere ejikere maka ubochi ndi ozo anyi gha ebido ozo bu ichere taya nke ugbo ala [More ...]
Kedụ Ka Arụrụ Ọrịa Arụrụ Ọrịa Ọrịa, Asthma na Covid-19 Gosi Dị?
prọfesọ Dr. Ahmet Akçay gara n'ihu, “Ndị ọrịa ashma ekwesịghị ịkwụsị ịgba ọgwụ ndị nwere cortisone n'oge a, ndị na-eze ume ma na-asụ ụkwara n'ihi ụkwara pollen kwesịrị iji ọgwụ mgbochi ma kpochapụ ọrịa ndị a. Ọtụtụ mgbe [More ...]
Nke abuo kariri gas
Ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ọrụ na - enye ike mmanụ gas (EPGİS) kwupụtara na e mere mkpịsị ụkwụ kurus 5 maka ọnụahịa batrị. Nyịnya njem ga-abịa n'abalị a ga-emetụta ọnụ ahịa mgbapụta. Ya mere, mmanụ ụgbọ ala n’ime ụbọchị abụọ [More ...]
Ministri oru ugbo na oke ohia agbakwunyela usoro ohuru na oria oria a na akuzi ihe banyere oru ugbo banyere ikwuputa ihe omume ndi oru ugbo, ndi n’aru ihe na ndi oke ohia. “Ugbo oru ugbo, nke ejiri wukwasie ya na muta ihe omumu ihe omumu di anya. [More ...]
N'ime arụmọrụ abụọ nke Ngalaba Azụmaahịa Na-ahụ Maka Azụmaahịa na Istanbul, arụ ọrụ jidere 3,5 puku 554 ọgwụ bara uru nke nde 170. Iko ahia mmanu nke ugbo elu Istanbul [More ...]
Onye Minista ahia na teknụzụ, Mustafa Varank kwuru na ụlọ ọrụ ụgbọ ala niile na-egbochi mmepụta ga-aga n'ihu n'ọrụ ha na Mee 11, “E nwere ihe ndị dị mkpa na-eme n'ihu. Ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ụgbọ ala [More ...]
A na-arụcha ọrụ ịkụ ahịhịa n'okporo ụzọ ụgbọ oloko ọzọ nke ga-ekute ume na etiti obodo site na otu Balıkesir Metropolitan Municipality. Okporo ụzọ Gar; sykamore, linden, osisi ezé, osisi cedar, osisi osisi marshmallow, trovet, lilac [More ...]
Obodo Ordu na-aga n'ihu na-agba mbọ iji ụgbọ njem gaa Boztepe site na iji ogologo 530 mita na nkasi obi obodo. N’okporo ụzọ dị 7,2 km ji Boztepe, nke na-anabata ọtụtụ puku ndị njem na mpaghara na ndị si mba ọzọ kwa afọ. [More ...]
Obodo ukwu mepere emepe emebiala njem ọhụrụ n’obodo Antalya. Ngwa eji eme njem bu igha eji abanye njem ndi mmadu n’ime ugbo ala ndi ogbe 25 nke diri Ndi Isi Obodo ma kwalite ijiri igwe [More ...]
IMM na-aga n'ihu na mbọ ya iji nyochaa usoro ezumike ụbọchị atọ ekwuputara ma rụpụta ọrụ ya ngwa ngwa. Kwesịrị ekwesị maka ndị nwere nkwarụ na ịnweta oge na ndị nwere nkwarụ [More ...]
Sözcü Azar Cigdem Toker dere ego ị ga-akwụ site na nchekwa steeti gaa na àkwà mmiri ndị e kwesiri nkwa na ha ga-agafe. Toker kwuru na oke akwa ahụ n'oge ọnwa atọ dị $ 93 nde. Egwuregwu na-àkwà mmiri [More ...]
Ọrịa corona, nke mere na Wuhan, China ma na-emetụta ụwa kemgbe ọnwa Disemba gara aga, wetara ọtụtụ ihe ị ga-eme. Ndị mmadụ na-ewere oke lebara onwe ha anya na ikpe na-abawanye [More ...]
Obodo Konya na-aga n'ihu na-agba mbọ ị bulite ọkọlọtọ okporo ụzọ dị na mpaghara ndị jikọrọ Obodo Obodo mgbe Iwu Iwu Ọhụụ gasịrị. Onye isi obodo Konya Uğur İbrahim Altay ya na Iwu Obodo Ọhụụ [More ...]
Ngwa maski ahụ nke Izmir Obodo ukwu mere ka ọ dịrị ụmụ amaala mfe ịnweta ọgwụ ahụike n'efu. Site na Mọnde, Mee 19, 4 puku 117 masks kesara n'etiti ndị masculin na isi 330. Munzmir Isi Obodo, 17 [More ...]
E mepụtara usoro Denizgözü-AHTAPOT kpọmkwem maka nyiwe mmiri na-atụle mkpa nke Navy Command's Electro-Optical Diffuser (EOD) Sistemu ma emere ya ka ejiri ya mee ihe n'ọnọdụ ASELFLIR-300D, nke ewepụtara na mbụ. [More ...]
Ministri na Omenala na Nleta Na –eme njem amalitela ọrụ ya maka osimiri mmiri ọha abụọ na-anaghị akwụ ụgwọ ọ na-ezube imezu n'oge udu mmiri a. Belek Public Beach, Kadriye Public Beach na Promenade ebe Mịnịsta ahụ arụpụtachala atụmatụ ya [More ...]
Onye na-ahụ maka ezinụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Emerald Selcuk, Machị 11, ụbọchị nke ikpe mbụ coronavirus hụrụ na Turkey, na oge ngwụsị nke Eprel jiri pasent 170 nke oku na-abata ALO 160 4.8 [More ...]
Minista na-ahụ maka ime obodo zigara okirikiri na ọchịchị gọvanọ 81 na “Obodo Ntinye / Exzọ Ọpụpụ”. Site na okirikiri, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Istanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, [More ...]
Nhazi nkwado nke abuo maka umu akwukwo iji sonyere LGS
E bipụta ngwungwu nkwado nke May, nke nwere ajụjụ 1000, iji kwado usoro nkwadebe ụmụ akwụkwọ ga-aga ule dị n'etiti n'etiti sistemụ ntughari ụlọ akwụkwọ sekọndrị (LGS). Site na ngwugwu nkwado wepụtara na Eprel [More ...]
A ga-eme nyocha nke etiti n'etiti ogo High School Pass System na 20 June 2020. Ọtụtụ usoro ga-anọrịrị n'oge ule maka ahụike ụmụ akwụkwọ. Maka oge mbụ n’afọ a, ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike ịbanye n’ụlọ nyocha ahụ ngwa ngwa. [More ...]
Nmekorita mba na ala nke Health site na ASELSAN na Bıçakcılar
ASELSAN na Bıçakcılar bịanyere aka na nkwekọrịta iji rụpụta igwe ngụgụ obi a na-eji emeghe ịwa ahụ obi mba. Lunglọ akwara obi bụ ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ na ngụgụ na-arụ ọrụ na mpaghara oghe obi mepere emepe. [More ...]